सचिनको रेकर्ड तोड्दै रोहित शर्मा ! बनाए यस्तो रेकर्ड !
July 6, 2019 July 6, 2019 Arjun565	0 Comments
आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा रोहित शर्माले ६ सय रन पुरा गरेका छन् । योसँगै उनी जारी विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको पनि शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन् ।यसअघि बंगलादेशका शकिब अल हसन ६०४ रन बनाउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिएका थिए ।
श्रीलंकाविरुद्ध ५६ रन बनाएपछि ६ सय रन पूरा
गरेका रोहित विश्वकपमा यो रेकर्ड बनाउने दोस्रो भारतीय खेलाडी पनि बने । यस्तै ६१ रन जोडेपछि उनी विश्वकपमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा पनि उक्लिए । जारी विश्वकपमा अहिलेसम्म चार वटा शतक प्रहार गरिसकेका रोहितले आज पनि शतक बनाउन सके एउटै विश्वकपमा सर्वाधिक शतक बनाउने कुमार सांगाकाराको रेकर्ड पनि तोड्ने छन् ।
२०१५ को विश्वकपमा सांगकाराले यो रेकर्ड बनाएका थिए । जुन रेकर्ड रोहितले बराबरी गरिसकेका छन् । यस्तै ६ सय रन पूरा गर्ने रोहित दोस्रो भारतीय खेलाडी बनेका छन् । एउटै विश्वकपमा ६ सय बढी रन प्रहार गर्ने पहिलो भारतीय खेलाडी सचिन तेन्दुलकर हुन् । उनले २००३ मा बनाएका ६७३ रनको रेकर्ड पनि अहिलेसम्म तोडिएको छैन् ।
एउटै विश्वकपमा सर्वाधिक रन ६७३ हो । यो रेकर्ड तोड्नका लागि रोहितलाई श्रीलंकाविरुद्धको खेलमा १३० रन बनाउनु पर्ने छ । भारतीय टिम सेमिफाइनलमा पुगिसकेको र रोहितको प्रर्दशन राम्रो रहेकाले सचिनको रेकर्ड तोडिने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले अनुमान गरेका छ लंकाविरुद्ध भारतका रोहित र केएल राहुलले पहिलो विकेटका लागि एक सय रनको साझेदारी पनि गरेका छन् ।
← भूकम्पले काठमाडौँ हल्लाएपछि अर्जुन क्षेत्रीले यस्तो…
युवा ज्योतिषले गरे अहिले सम्मकै खतरनाक भबिष्यवाणी : अब केपी प्रचण्डलाई यस्तो खतरा हुने (भिडियो सहित) →
विश्वकप २०१९ को उपाधि घरेलु टोलीलाई, ओभर ‘टाई’ भएपछि विजेताको टुङो यसरि लगाइयो
July 14, 2019 sajhachautari.com 0
क्रिस गेलको दाबी : विश्वभरका बलर मदेखि डराउँछन्, तर भन्न सक्दैनन…
May 23, 2019 Arjun565 0
यसकारण भारतले यसपटकको बिश्वकप जित्नै सक्दैन …